အနုပညာအိမ်လေး: အင်္ဂါနေ့ လွှတ်တော်တွင် NLD အရေး အဆိုမတင်နိုင်သေး
အင်္ဂါနေ့ လွှတ်တော်တွင် NLD အရေး အဆိုမတင်နိုင်သေး
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။နေပြည်တော်တွင် အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို လွှတ်တော်တက်ရေးနှင့် ပတ်သက်
၍မေးခွန်းထုတ်မှုနှင့် အဆိုတင်သွင်းမှု တစုံတရာ ပြုလုပ်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“အဲဒီကိစ္စ အဆိုတင်တာတွေ မရှိသေးဘူးဗျ။ တည်ရှိဆဲ၊ မပြီးပြတ်သေးတဲ့ agenda တွေအတိုင်းပဲ သွားနေ
ပါတယ်” ဟု လွှတ်တော်သို့ သတင်းတက်ရောက်ယူနေသော မဇ္ဈိမ သတင်းထောက် လင်းဘိုဘို က ပြော
ဧပြီလ ၁ ရက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၄၃ နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သော NLD အနေဖြင့် လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်များ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုမည့် စာသားပြုပြင်ပေးရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် သက်ဆိုင်ရာရုံးများ
သို့ စာရေးသားပေးပို့ အကြံဉာဏ်ပြုထားဆဲ ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို လွှတ်တော်တက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်မှုနှင့် အဆိုတင်သွင်းမှု တစုံတရာ ပြုလုပ်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း သိရ (ဓါတ်ပုံ မဇ္ဈိမ)
ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုတင်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် လွှတ်တော်တက် ကိုယ်စားလှယ်များအကြား တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများလည်း ရှိနေကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
“လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်း သူတို့ဟာနဲ့သူတို့ ညှိနှိုင်းမှုတွေ ရှိတယ်ဗျ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆိုတင်မယ်ပေါ့။ထောက်ခံပေးဖို့ပေါ့။ ကြံ့ခိုင်ရေးကိုလည်း ညှိနေကြတာပဲ။ မနေ့က အနေအထားအရတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးက နည်းနည်း မာတဲ့ သဘောထား ရှိတယ်။ ဒီလိုပဲ လိုက်ပြီး negociate လုပ်ကြတာပေါ့။ ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးတို့၊ ဒေါက်တာအေးမောင်တို့။ ဒီ တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှာ တင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်” ဟု သတင်းထောက် လင်းဘိုဘို က ပြောသည်။
အခြေခံဥပဒေတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ကတိသစ္စာပြုရမည်ဆိုသည့် ပုဒ်မ ၁၂၅ (ခ)အတွက် ဇယား ၄ ပါ စာသားတွင် “နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီး” ဟု ပါရှိနေရာ NLD အနေဖြင့် “လေးစားလိုက်နာပြီး”ဟူ၍ ပြင်ဆင်ပေးရန် အကြံပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အဆိုပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် ပုဒ်မ ၁၂၅ အား ပြင်ဆင်လိုပါက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း၏ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းက စတင်တင်ပြလာပါကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က လက်ခံဆွေးနွေးမည် ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်၏ ထောက်ခံဆန္ဒမဲဖြင့်သာ ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ၃၄၃ ဦး၊ အခြားနိုင်ငံရေးပါတီနှင့် တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ် ၁ဝ၅ ဦးတို့ ရှိကာ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၁၆၆ ဦး ရှိနေသည်။
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တတိယ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၇ ရက်မြောက် ဖြစ်သည့် ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့ အစည်းအဝေးကို တနာရီခန့်ကြာ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှ အရွေးချယ်ခံ NLD ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခြင်း မရှိသေးပေ။
သို့သော် ယခု တတိယ အစည်းအဝေးများအတွင်း ရလဒ် တစုံတရာ ပေါ်ထွက်လာနိုင်ကြောင်း ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှရွေးချယ်ခံ NLD ပါတီဝင် ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုး က မဇ္ဈိမကို ပြောဆိုသွားသည်။
သတင်းကိုပေါက် (မဇ္ဈိမ)အင်္ဂါနေ့၊ ဧပြီလ ၂၄ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်
အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေ ပူးပေါင်းပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်း...
လွှတ်တော် တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည...
ရွှေလောင်းမြို့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖွဲ့ စည်းကြောင်း ကြေ...
အရှင်ဝီရသူ ယဉ်ကျေး လိမ္မာသင်တန်း တရားဟော
ကော့ကရိတ်မြို့နယ် NLD ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ အခမ်းအနား
နိုင်ယက္ခ နှင့် နိုင်မျိုးသွေး အား မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ...
လာမည့် မေ ၂ ရက်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသား...
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ေ...
သမ္မတကြီးနှင့် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း တွေ့ဆုံ ( ဓာတ်ပုံ-သ...
ဘန်ကီမွန်းနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်...
၂၃.၃.၂၀၁၂ ရက်နေ့ ထုတ် Hot News ဂျာနယ်ပါ “လယ်ယာစိုက...
အမေစု နှင့် NLD အမတ်များ ပြည်သူ့ ဆန္ဒ အတွက် အလျှော့...
ဘမ်ကီမွန်း နေပြည်တော် မသွားခင် ဦးသန့် ဂူဗိမာန်ကို...
အများ ပြည်သူသို့ အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်
အနာဂတ်အတွက် ပရဟိတ ဆေးပညာရှင်များ - Kyaw Thu
ပန်ဝါကို အစိုးရတပ် မှ စတင် တိုက်ခိုက်နေပြီဟု KIA ဆ...
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမစ္စတာဘန်ကီမွန်း နှင့် ပ...
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း ဦးသန့်ဗိမာန်တွင် ဂါရဝပြု ( ဓာတ်ပ...
UN အတွင်းရေးမှူးချူပ် ဘန်ကီမွန်း လဲ ရောက်လာပါပြီ (...
ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု အဖွဲ့...
အမရပူရမှ အသက် ၁၂၀ ကျော်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အဖွား ဒေါ်မြကြည်...
မလေးရှား မှာ သန့် ရှင်းတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ရေး လူ...
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း ယနေ့ ...
NLD အမတ် ၂ ဦး ပြောပြတဲ့ ကျမ်းကျိန် စကားရပ် ( ရုပ...
KIA မှ အစိုးရရုံးများနှင့် အင်အားနည်း တပ်စခန်းတွေက...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂ မူဝါဒအကြီးအကဲ မစ္စ...
ဈေးသည်တွေဆီက စည်ပင်သာယာတို့ အခွန် မတရား ကောက်ခံနေ...
မဲလ ဒုက္ခသည်စခန်း မီးလောင်၊ အဆုံးအရှုံး များပြား ( ဓ...
မလေးရှား တွင် ဖြစ်ပွားနေသော ဆန္ဒပြမှု့ နှင့်ပါတ်သက်...
ညအချိန် လက်နှိပ်ဓါတ်မီး ကိုင်ဆောင်လျှင် သေနတ်ဖြင့်...
KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဝိုင်းမော် မြို့နယ် စဒုံးမြို့...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ပျော့ပြောင်း ပေမယ...
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ရုံး ဖွင့်ပွဲ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကတ်သရင်း အဲရ်ှတန် တွေ့ဆုံ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မမုန်းပါဘူးလို့ ပြောတဲ့ အာဏ...
၂၀၁၂ ခုနှစ် HIV/AIDS လုပ်ငန်း စီမံချက်များ အတွက် အ...
မစုစုနွေး ရဲ့ သတို့သားလောင်း
ဘန်ကီမွန်းနဲ့ အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် မြန်မာ့အရေး ဆွေးေ...
ဦးအောင်သောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ပါမစ်ဖြင့် နယ်စပ်မှ ...
EU ရဲ့ နိုင်ငံခြား မူဝါဒရေးရာ အကြီးအကဲ မြန်မာပြည်က...
အကျဉ်းသား လွှတ်ရေး ပြောဘို့ ဘန်ကီမွန်းကို တိုက်တွန်...
ဘာသာ စကားပေါင်း ၂၄ ဘာသာ ကိုမြန်မာလို ORDBOK မှာ ပြ...
ထားဝယ် စီမံကိန်းမှ အီတာလျန်-ထိုင်းကုမ္ပဏီ ရပ်ဆိုင်း...
ကောင်းဇော်ဟိန်း ကုမ္ပဏီမှ ဒေသခံ ရေနံလုပ်သားများ အပေ...
ကျောက်ဆည်မြို့ တွင် မိုးသက်လေပြင်း ကျရောက်ပြီး လူတ...
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအတွင်း သံဃာများ အား ဦးဆောင်...
Google ဝန်ဆောင်မှု များအား အဆင့် မြှင့်တင်
နိုင်ငံခြား ငွေလွှဲကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်၍ ဦးသန်းလွှင် ...
လုံခြုံရေး အရ မြစ်ကြီးနား-နမ္မတီး-မိုးကောင်း လမ်း သ...
KIO ဌာနချုပ် စစ်တပ်ဝိုင်း
ပြည်သူ့အကျိုးနှင့် တိုင်းပြည် အကျိုးအတွက် လိုအပ်လာ...
ကတိသစ္စာပြုချက် ကိစ္စ သူရ ဦးရွှေမန်းသို့ ၁၆ ပါတီ မေတ...
နွေရာသီ ရောဂါ - Kyaw Thu
ရွှေညဝါ ဆရာတော် သိက္ခာထပ် အလှူတော်မင်္ဂလာ ဒေါ်အောင်ဆန်း...
အိုးအိမ် ဦးစီးဌာနရဲ့မတရား အိမ်ခြံမြေ သိမ်းပိုက်မှု...
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် Jaw Bum တွင် အသင်းတော်များ...
UNFC နှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေးဖြစ်လျှင် KIO ကိစ္စ ပါဝင်...
ဒဂုန်မြို့သစ်မှာ မြေမသိမ်းတော့ဟု တိုင်းဝန်ကြီးချုပ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အီတလီနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြ...
သုံးခွမြို့နယ် ကျေးရွာ ခုနစ်ရွာကျော် သောက်သုံးရေပြ...
မေလ ၈ – ၉ တွင် စီအဲန်အက်ဖ် နှင့် အစိုးရအကြား ပြည်ေ...
ကုလသမ္မဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ဧပြ...
စာပေနှင့် စာနယ်ဇင်း ရုံးခန်းအား အရက်ဆိုင် ငှားရမ်း...
သုခ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ပဲခူး) ဖွင့်ပြီ - Kyaw Thu
NLD ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော်တက်မည့် အချိန်ကို မြေ...
အီတလီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည...
ကြံခင်းမြို့ ဓမ္မာစရိယ စာချသင်တန်းတွင် ဦးဝီရသူ တရာ...
လယ်သမားများ အပေါ်နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်...
လမ်းမပေါ်မှာ ငွေသုံးရာ ချေးဖို့ စေခိုင်းခံရတဲ့ ကလေး...
ဆရာမောင်ဝံသ မပြောခဲ့တဲ့ စကားအား DVB ရုပ်သံက ကြေညာသ...
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသား အမွေအနှစ် နေရာများကို က...
အီတလီ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ...
၂၆ ရက်နေ့တွင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်( ပြည်သူ့လွှတ်တော် ...
သုံးခွ ရေရှားမှု ပြဿနာ ကြာရှည်ဖွယ်ရှိ
လွှတ်တော်က ကောင်တွေ ဆယ်တန်းတောင် မအောင်ပါဘူး
လွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များက ပြည်သူဘ...
စစ်ရေး မဟုတ်သည့် ပိတ်ဆို့မှုများ ကနေဒါ ဆိုင်းငံ့
ယနေ့နံနက် ၇နာရီခွဲက မြစ်ကြီးနားမြို့ ဆေးရုံထောင့် ...
လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဆက်လက်ထားရှိမည်
မျိုးဆက်သစ် တို့အတွက် အင်အား - Kyaw Thu
ကြံခင်းမြို့ ဓမ္မာစရိယ စာချသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနာ...
အစိုးရက ဗန်းမော်မြို့နယ် လူထုရှေ့မှောက်တွင် ငြိမ်း...
ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ သမ္မတ နှင့်ေ...
တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်ခိုင်မာ ဖြောင့်မတ်ရေး လွှတ်တော်တ...
ဦးတင်ဦး ညောင်တုန်း NLD ရုံးဖွှင့်ပွဲ သွားရောက် ( ...
ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်မှ ဝါးခယ်မတွင် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးသ...
လွှတ်တော်တွင်း တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ နည်းလမ်...
NLD ပါတီ က အခြေခံဥပဒေ ပါစာသားအချို့အား ပြင်ဆင်ပေးရ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အီတလီ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ြ...
စင်ကာပူရောက် မြန်မာများ တရားဝင်ငွေလွှဲနိုင်ပြီ
လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆင်ခြင်တုံတရား ရှိသလား
ရွှေည၀ါဆရာတော်အားသိက္ခာထပ်ပြီး ၈၈ နှင့် မျိုးဆက်သစ်ေ...
မအေးယုအောင် မိခင်ထံပြန်ရောက်၊ ခြိမ်းခြောက်ခံထားရ.
ညောင်တုန်းမြို့အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရုံ...
လွှတ်တော်ထဲကအသံများ - DVB 23.04.2012 ( ရုပ်သံ-သတင်...
အတိုက်အခံ မြန်မာကျောင်းသား လူငယ်များ ညီလာခံ
ဖြစ်ပျက်မှု အမှန်ကို အသိပေးခြင်း
CPI ပေးမည့် တနှစ်စာ ဆန်ကို မြစ်ဆုံဒေသခံများ မျှော်...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး လယ်သမ...
မှန်ကန်တဲ့ Media ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်..
ဗိုလ်တထောင် (စိန်ပေါလ်) ကျောင်းသားဟောင်းများ ချီးက...
ပိုမိုဝါရင့်သော တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်ေ...
သံတွဲ ဒွါရာဝတီဈေးမီးလောင်မှု စွပ်စွဲခံရသူက ပြန်လည်...
အီးယူက မြန်မာအပေါ် လက်နက်ရောင်းချ မှုမှလွဲ၍ ကျန်ပိတ်...
မီးမလောင်သင့် တဲ့ ကသာဈေး ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုသည့် စာသား များကို ပြင်ဆင်ပေးရန်...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က လွှတ်တော်တွင် ကျမ်းသစ္စာကျမ်းဆိုသ...
ရွေးကောက်ပွဲကို ခုတုံးလုပ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ( ရ...
လွှတ်တော် ဥပဒေများအကြောင်း သင်တန်း NLD ကိုယ်စားလှယ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အနိုင်ရ NLD လွှတ်တော် အမတ်တွေ...
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေသောနိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ဆုံ...
ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နဲ့ စစ်သားအမတ်
ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ် ယဉ်ကျေး လိမ္မာ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲ
လွှတ်တော် တက်ရေး မတက်ရေး ဒီချုပ်ပါတီ အနိုင်ရ ပြည်သူ...
မြန်မာ လူငယ်ကို အာရှပစိဖိတ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ပေးအပ်
ဒီနေ့ ထုတ်သတင်းစာပါ လွှတ်တော်ထဲက အပြောင်းအလဲများ
တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၅၉ ဦး ရာထူးမြင့်သူများဖြ...
We Generationလူမှုရေးအဖွဲ့ အား ဘုရားသန့်ရှင်းရေး မလ...
မျှဝေမှု နှင့် ပေးဆပ်မှု - Kyaw Thu
လွှတ်တော်သို့ သွားရောက်နိုင်မည့် အခြေအနေကို စောင့်ဆ...
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဥပဒေဆိုင်ရာ သင်တန်းနောက်ဆ...
ကျမ်းသစ္စာ ဆိုရမည့် စာသား ပြုပြင်ပြီးမှသာ NLD လွှတ်ေ...
ကြို့ပင်ကောက်မြို့မှာ ယခုနွေရာသီမှာ ရေအလွန်ရှားနေ
မသင်မနေရ မူလတန်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ကူညီမည်
ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly ဂျာနယ်
မြန်မာ-ဂျပန် ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲတွင် ပြည်ထေ...
လှကွန့် - ဒေါ်ခင်ကြည် ပြောပြတဲ့ လူငါးယောက်အကြောင်း
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့နှင့် ဗမာနိုင်ငံလုံ...
မြန်မာ့ ငွေလဲလှယ်နှုန်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အပေါ် IMF ...
ကျမ်းသစ္စာ အသုံးအနှုန်းပြောင်းလဲပေးရေး အဆို လွှတ်တော...
မြန်မာစစ်တပ် ခလေးစစ်သား စုဆောင်းဆဲ ( ရုပ်သံ-သတင်း ...
နမ့်ဆန် မှာ လူငယ်တဦး ကို ရဲတွေ က ဝိုင်းရိုက်ဖမ်းဆီ...
ဂျပန်နိုင်ငံ သို့ ပေးရန် ကြွေးမြီ ၃.၇၂ ဘီလျံလျှော်...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ နေရာတွင် သရုပ်ဆောင်ရန် ပထမအဆ...
ဧပြီလ နောက်ဆုံးပတ်တွင် မုန်တိုင်းတစ်လုံးဖြစ်ပေါ်လာဖ...
မကွေးတိုင်း၊ ဆင်ဖြူကျွန်းမှာ NLD ရုံးခန်းသစ်ဖွင့် ...
နယ်စပ် ၁၀၅ မိုင်ဂိတ် မိုင်းပေါက်ကွဲမှုတွင် လ၀က အရာရ...
အပူရှိန်ဒဏ်ကြောင့် နေပူထဲ အကာအကွယ်မဲ့သွားခြင်း၊ ကြ...
"နိုင်ငံရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် ကျောင်းသားဟောင်းများအာ...
သာဓု .. သာဓု .. သာဓုပါဗျာ - Kyaw Thu
မဲခေါင်ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဂျပန်က အထောက်အပ...
မြန်မာ့ ငွေကြေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်း တွေကို အမေရိကန် ...
ရွှေတွံတေး ဆရာတော်၏ မဟာချိုင် မဟာသင်္ကြန်အလှူပွဲ
ဝါးခယ်မမြို့နယ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ (မြောင်းမြခရို...
ပြည်သူ့ ဆေးရုံ ဆိုတဲ့အမည်မှ “ပြည်” ဆိုတဲ့ စာလုံး...
ဖိုးဝမောင် ၏ ဘဝသင်္ခန်းစာ စာသားများကို သူကိုယ်တိုင် ...
ဒီချုပ် ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော် မတက်ရန်သေချာသလေ...
NLD လွှတ်တော်လုံးဝ မတက်ဘူးဆိုသည်မှာမဟုတ်ဟု ဦးဥာဏ်...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အတွင်းက လယ်မြေတွေကို တပ်ရန်ပုံငေ...
” ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ရှိ သီးသ...
ဘက်စုံပေးဆပ်မှုများ - Kyaw Thu
ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ အကျင့်ပျက်မှုများ ( ရုပ...
ကြည်ညို သဒ္ဒါ ရွှေညဝါ အပိုင်း - ၂ ( ရုပ်သံဖိုင် )
ဥရောပ သမဂ္ဂ က မြန်မာ နိုင်ငံ အပေါ် ဒဏ်ခတ် အရေးယူထားမ...
ရွှေလီ(၁)ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ အသေးစိတ် အစီရင်ခံစာ...
မူဆယ် (၁၀၅)မိုင်ဇုန်အတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွါး
နာရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ပွဲ တက်ရော...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ကော့မှူးမြို့နယ် နှစ်သစ်ကူး မ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး သက်ကြီးပူဇော်ပွ...
မတရားမှုကို လက်ပိုက် ကြည့်မနေတဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ပြ...
ဗကသ အိုးဝေ မဂ္ဂဇင်း မထုတ်ဖို့ သတိပေးခံရ
အမေရိကန် အစိုးရ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုအချို့ စတ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနှစ်ဆန်းမှာ ၀ါရင့်နိုင်ငံ...
"မင်းကိုနိုင်နှင့် ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အမည်...
NLD ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော် တက်ရေး ဆုံးဖြတ်ရန် ရ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ပြည်ပ ခရီးစဉ် အမေရိကန်ကြိုဆ...
ကျမ်းသစ္စာ စကားရပ် ပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နော်ဝေသံတမန်ရုံး ဖွင့်လှစ်ဖို့ရိ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သ ည် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အတွင်းပ...
အမေရိကန် နိုင်င်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် ၏...
တတိယအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု​အတွက် ပဏာမ အမည်စာရင်း ...
ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံး စာရင်းထဲ မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်...
မုံရွာမြို့ မှာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ည က မီးလောင်မှုဖြ...
The Lady ( မြန်မာစာတမ်းထိုး ရုပ်ရှင် အစ အဆုံး ) ကြ...
ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း မှ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကံ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ၁၀၁၂ ဧပြီလ အထ...
မကောင်းမှုဒုစရိုက်များကို ရိုက်ချိုးခဲ့သောနှစ် - Ky...
မြန်မာ့ နှစ်သစ်ကူး အခမ်းအနားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည...
"ဦးခင်ညွန့် လူဝတ်လဲပြီ" ဓာတ်ပုံ-သတင်း
နိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးကို ...
ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာနှင့်အတူ - Kyaw Thu
မင်းကိုနိုင် တို့ သံချပ်အဖွဲ့ ကို တိုက်ခိုက်သူတွေ ...
ပုဂံမြို့၊ ယွန်းပညာကောလိပ်၏ သတ္တမ အကြိမ် ဒီပလိုမာအေ...
ဒုတိယ အကြတ်နေ့ ပေးဆပ်မှုများ - Kyaw Thu
သင်္ကြန်နောက်ဆုံးနေ့ ၈၈ သံချပ်အဖွဲ့ ဖျော်ဖြေမယ့်နေရာ...
သုံးခွမြို့ နယ် ပင်လယ်ကမ်းခြေကျေးရွာမှာ သောက်သုံးေ...
ဧပြီ ၂၃ ရက်အမီ လွှတ်တော် ကျမ်းကျိန်စာသားကိစ္စ အဆင်ြေ...
ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့် သံချပ်ဖျော်ဖြေရေး အဖွဲ့ သံလှ...
"၈၈ ကျောင်းသားများထိုးသည့် သံချပ်"
ရွှေညဝါ သင်တန်းနှင့် ရန်ကုန် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဖွင့်လှစ်...
သင်္ကြန် အကျနေ့ ဒီချုပ်ရုံးချုပ်ရှေ့ စတုဒီသာအလှူ ( ရ...
ဒုတိယ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့တွင် ၈၈ သံချပ်အဖွဲ့ ၇ နေရာတွင်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နေအိမ်ရှေ့သို့ BG သွေးကူညီရေး...
ရဲတိုက် ဖောင်ဒေးရှင်း မှ ကချင် ဒုက္ခသည်များအား ကူညီ...
၈၈ မျိုးဆက် မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် သံချပ်အဖွဲ့ ဖျေ...
ဦးခင်ညွန့် ဆောင်းပါးအကြောင်း ဦးမြင့်ရွှေ ပြန်ရှင်...
မန္တလေး ကျုံးအနောက်ဘက် လမ်း ၈၀ပေါ်က ထက်မြက်မဏ္ဍပ်မှာ ပ...
ပထမသင်္ကြန်အကြတ်နေ့မှာ ၈၈ မျိုးဆက်သံချပ်အဖွဲ့ကို နာေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ရှေ့မှာ ရေကစား (ရုပ်/သံ) ...
မြစ်ကြီးနားမြို့ ထူးမဏ္ဍပ်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ၊ သေပျောက...
မန္တလေး စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာများ၏ "တော်ရိ လျော်ရိ" သကြ...
ပါပါလေး သံချပ်အဖွဲ့မန္တလေးမှာ ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေ (ရ...
ခွပ် ချိန်တန် ခွပ် … က ချိန်တန် က Kyaw Thu
အောင်စည်ရွမ်းသံ ကြားပြီထင့် ပြည်တော်ဝင်မယ်လေ
အဝေးရောက် မြန်မာပြည်သားများ အမိမြေမှ အတာသင်္ကြန်ကို ...
ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှု လျှော့ချမယ်လို့ G8 အစည်းအဝေးမှ ထ...
ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် တချ...
ကိုယ်တွင်း အပူမီးများ ငြိမ်းကြပါစေ - Kyaw Thu
မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်ပွဲ နှင့် သရုပ်ပျက် ယဉ်ကျေး...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ သံချပ် ဒီနေ့ ဘယ်...
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်တွင် ကော့မှုးမှသက်ကြီးမဲဆန္ဒရှင် ၆၂ ဦ...
မေတ္တာ၏ ‘သာဓုပါဗျာ’ သံချပ်အဖွဲ့ ယနေ့သုံးနေရာ ဖျော်ေ...
မိုင်ဂျာယန်သို့ UN လာရောက်ခြင်းကို ကျေးဇူးတင်
ရွှေတိဂုံသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် ဗြိတိန် ၀န်ကြီးချုပ် မ...
ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်ဖို့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချု ပ...
၀မ်းတွင်းမြို့  ရှိ ( တ.စ.ည ) ပါတီ ရုံး မီးလောင်ကျ...
မြန်မာအစိုးရတပ်အား နေရာမရွေးတိုက်ခိုက်ရန် KIO အမိန...
ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့တွေ့ဆ...
အကြိုနေ့ပေးဆပ်မှုများ - Kyaw Thu
ကချင်စစ်ဒေသမြင်ကွင်း ( ရုပ်သံဖိုင် )
KNPP မှ လွိုင်ကော်ဒေသ လူထုစည်းရုံးရေး တားမြစ်ထားခြ...
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ကာကွယ်ရေး NLD အငြင်းပွား
ရန်ကုန်-ဒလ ကူးတို့သင်္ဘော ၀န်ထမ်းများ ပြေစာလွတ် တန...
ရန်ကုန် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ ကန်တော်ကြီးစောင်း ကရဝိတ်အနီ...
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစု...
NLD ပါတီရဲ့  စတုဒီသာပွဲ
လူရွှင်တော် မေတ္တာတို့အဖွဲ့ သင်္ကြန်မဏ္ဍာပ်များတွင် သံချ...
တိုကျိုမောင်တို့ရဲ့ ရင်ဖွင်သံ သင်္ကြန် သံချပ်များ ( ...
ခေတ်သစ်နဲ့နှစ်သစ် အတွက် အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ ဆုတောင်...
မဟာသင်္ကြန် အကြို့နေ့ တွေ့ရတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင် ဓာတ်ပ...
မန္တလေး ၌ လေပြင်းများတိုက်ခိုက်
ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန် ရှိ YC ဖေ့ာဗူးစက်ရုံ မီးလောင်...
၀င်ကြေး ၅၀၀ ကျပ် နဲ့ IC မဏ္ဍပ် မှာ လူစည်ကား
မန်းမြို့တော်ဝန် သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ဖွင့်ပွဲကို ယနေ့ ညနေ ၅ ...
သင်္ကြန်အကြိုနေ့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းက မြင်ကွင်း ဓာတ်ပံ...
စစ်တွေ- ရန်ကုန်ကားလမ်း တိုးချဲ့မှုကြောင့် ရှေ့ဟောင်...
“ သာဓုပါဗျာ “ သံချပ်အဖွဲ့ လှည့်လည်ဖျော်ဖြေ
သာသနာ့ဘောင်အတွင်းသို့ - Kyaw Thu
ဦးခင်ညွန့် အင်တာဗျူးမပေးဘူးဆိုသည့် ပြောကြားချက် ဘ...
NLD အမတ်တွေ လွှတ်တော်မှာ ကျန်းသစ္စာဆိုရခက်
ကျွန်းနံ့သာ အနီးပင်လယ်ရေပြင်ထဲမှ မီးတောက်များ မီးခ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ သင်္ကြန်သံချပ်ထိုးမည်
ရခိုင်ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲတော် စတင်ဖွင့်လှစ်
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ နှင့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုအဆင့်...
၁၂ ကြိမ်မြောက် ကယန်းအမျိုးသားနေ့ ၈၈ မျိုးဆက် တက်ရေ...
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ်အတွက်..မိုးမခ မဟာသင်္ကြန်စာ...
အခက်အခဲကြားက တိုးထွက်လာနိုင်တဲ့ NLD ( ရုပ်သံ-သတင်း...
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် NLD အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ ဂုဏ...
ချောင်းသာမှာ ဆူနာမီ သတိပေးချက် အားနည်း မေးမြန်းချက...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် သမ္မတ တွေ့ဆုံမှု ကမ္ဘာ့သတင်း...
ဆူနာမီ သတိပေးချက် ကိုပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခြင်း
ရခိုင်ကမ်းရိုးတမ်းရှိ ရေနံသာကျွန်းဝယ် မီးတောင်ဟော...
အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျင်ဝက်ဘ် မြန်မာမီဒီယာများနှင့် သ...
ဆူနာမီ သတိပေးချက် CNN သတင်း ( ရုပ်သံဖိုင် )
ဆူနာမီ နှင့် ပတ်သက်၍ ဦးထွန်းလွင် နှင့် အင်တာဗျူး
ဆူနာမီ သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း။ (၁၁-၄-၂၀၁၂ ရက် ညနေ...
အပေါ်ထပ်နှင့်အောက်ထပ်ဇာတ်လမ်း - Kyaw Thu
မြန်မာစာမထည့် ၊ root မလုပ်ဘဲ မြန်မာလိုကြည့်နိုင်စေ...
“iap free” for iPhone/Pad/Pod touch (Cydia App): I...
ယနေ့ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဦးခင်ညွှန့်...
ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကြီး တရားဓမ္မများ ဟောကြားရန် ထိုင်းနိ...
ယနေ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ က...
(၁၂) ကြိမ်မြောက် ကယန်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနား (ဓာတ်...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် နိုင်ငံတော် သမ...
သင်္ကြန်မှာ သီချင်းဆိုခွင့် အပိတ်ခံရသူများ
"နိုင်ကျဉ်းတွေ သင်္ကြန်မှာ စုပေါင်းရဟန်းခံမည်"
မြေကြီးကို (ကလိ)ထိုးရုံမျှ နှင့် စိုက်နိုင်သောသစ်ပ...
ရွှေလီ(၁)ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ အမှတ်(၅) စက်အား အကြီးစား...
နိုင်/ကျဉ်း လွတ်မြောက်ရေး အမတ်သစ်များ မဆိုင်းမတွ ဆ...
တောင်ဥက္ကလာ ဟေမ၀န်ဈေး မီးလောင်နေစဉ် ( မှတ်တမ်းဓာတ်...
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များကိ...
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အလုပ်အမှုဆောင်သစ်အ...
တပ်မတော် နည်းဥပဒေ ၁၃ – ၂ (C) အရ ကလေး စစ်သား အဖြစ်မ...
ပြင်ဦးလွင်ဒေသမှ လေဘေးဒဏ်ခံရသည့်လယ်မကျေးရွာသို့ ကူ...
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ မ...
အပစ်ရပ် SSPP/SSA အား အစိုးရတပ်ထိုးစစ်ဆင် ဒေသခံရာကေ...
ကေအန်ယူ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ ထားဝယ်ရောက...
မွန်ပြည်သစ် ဥက္ကဌက အကျဉ်းသားမလွှတ်ပေးသ၍ မော်လမြိုင်သ...
အစိုးရနှင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) တို့၏ ဆက...
"ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးခင်ညွန့် ပထမဆုံးအကြိမ် ရဟန်...
မန္တလေး ပြည်ခိုင်ဖြိုးရုံး ခဲပေါက်ခံ ရမှု အမှုဖွင့်
သတင်းရေးသားသူ အမည်အား ဖော်ထုတ်ခွင့်မရှိဟု The Voic...
ဘက်ပြောင်းလိုသည့် ၂၀၁၀ အမတ်ကို လမ်းမတော် NLD အဖွဲ့...
အခက်အခဲတွေကြားထဲက ၆ ကြိမ်မြောက် အောင်မြင်စွာ ဖွင့်...
မိုးကောင်း သစ်ဆိပ်ဝင်း အလှူ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော်အဖြစ် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ...
တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးရဲ့ရလဒ် ၂၀၁၂ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
” ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်ရှိ သီ...
၂၄ နှစ်ကြာ မျှော်လင့်နေတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေရဲ့ရလဒ...
အနာဂတ်သစ် ဂျာနယ် အမှတ် (၁၃)
ခေတ်သစ်တစ်ခု ၏ အစဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မတို့ ယုံကြ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဧပြီ ၂၃ လွှတ်တော...
ဘုရားပွဲအတွက် ရန်ပုံငွေဆိုပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် လမ်းပ...
သင်္ကြန် အလုပ်ပိတ်ရက်အား လုပ်ခအပြည့် ခံစားနိုင်ရေးေ...
ကမာရွတ်မြို့နယ် NLD ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲ ( ဓာတ်ပုံ-သတ...
ဧရာဝတီမြစ်ဘေး တရုပ်မရှိရေး အတွက်..ပြည်သူအားလုံး စု...
NLDအောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့ဝင်များကို ဝါးသင်္ခရွာက ဂုဏ်ပြ...
အိမ်ဖော်မလေး မအေးယုအောင် ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်း
မျှဝေသူတို့ ၏ ပေးဆပ်မှုများ - Kyaw Thu
မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း တရုတ် CPI ကုမ္ပဏီ၏၂၀၁၁ ခုနှစ် ...
NLD ပါတီတွင်း အယောင်ဆောင်များ ရှိဟုဆို
မီးပူဖြင့်ကပ်ခံရသည့် မအေးယုအောင် အမှု သက်သေများကို ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် KNU ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင...
အာဆီယံလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း ပွင့်လင်းဖို့ တောင်...
ဆဲဗင်းဂျုလိုင်(7JULY ) နှစ်ငါးဆယ်ပြည့် အခမ်းအနား...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း ဦ...
MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းမှ ၃၀-၄-၂၀၁၂ တွင် စတင်ပြသမည့် T...
မြန်မာ့ တပ်မတော်သားများ စိတ်ဓာတ် နဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေ...
၂၀၁၂ ရဲ့ပြဿနာတွေ ၂၀၁၅ မှာ ထပ်မဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်မယ...
ပြည်သူအတွက် အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ့် အမျု...
သန်းရွှေ ရဲ့မြေး ဖိုးလပြည့် စောင့်နေရလို့ လေယာဉ်ထွက...
မန္တလေး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မဟာသင်္ကြန် မေတ...
ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်ေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံတူ ပန်းပုရုပ်ထု ပေးအပ်ပွဲ ( ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အောင်နိုင်ရေး အဖွဲ...
ဒေါပုံမြို့နယ် အမေ့အိမ် ပညာဒါနကျောင်း ရန်ပုံငွေ ဂီ...
အောင်မြင်မှုကို ဂုဏ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြေး...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဦးဆောင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲေ...
၈၈ မျိုးဆက် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း မအူပင် ခရီးစဉ်...
"၈၈ ကြားဖြတ် စောင့်ကြည့်ကွန်ယက် အစီရင်ခံစာကို ကော်...
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် နှင့် ကရင်အမျိုး...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ( NLD ) ဗဟိုအောင်နို...
နိုင်ငံတကာ စည်းလုံးရေးဆု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရရှိ
အမှန်တရားရဲ့အောင်ပွဲ ပြည်သူ့အောင်ပွဲ အဖြစ် မအူပင်ြ...
ဒိုင်ကို အပြစ်မယူ ထိုးသူကို အရေးယူတဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်...
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲထက် လက်ရှိ ပြည်သူတွေကို ဘယ်လို အက...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရာ သရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်( ဓာတ်ပံ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အမေရိကန်လွှတ်တော် ရွှေတံဆိပ်ဆ...
စစ်တပ် ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ဗန်းပြကာ လိမ်ညာနေကြသော အရာရှ...
မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတကာ ပါလီမန်လွှတ်တော်များ သမဂ္ဂအ...
ပဲခူးမှ မီးပူဖြင့် အကပ်ခံရသည့် အိမ်ဖော်မလေး ၏ နောက...
KNU နှင့် အစိုးရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ...
မန္တလေးတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး မိုးသီးများ...
မဲပြားပေါ်တွင် ဖယောင်းသုတ်ခြင်း ကိစ္စအား ပြည်ထောင်စု...
မြစ်ဆုံ ဆည်တည်ဆောက်ရေးကိုလက်ရှိ အစိုးရလက်ထက် ရပ်နာ...
““အောင်ပွဲခံမှု ပုံစံအချို့က ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုကို ဥ...
မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မီတ...
"ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် မပွင့်ဖြူပြုံး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး (စမ်း...
KNU နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆွေးနွေးမည်
မီးပူနဲ့ ကပ်တဲ့ တရားသူကြီး ကတော် အိမ်ဖော်မလေးရဲ့ မ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ရဲ့ ပွင့်လင်းလူ့ အဖွဲ့ အ...
လွတ်မြောက်ရေးသို့ …Kyaw Thu
ကျောင်းသားများ အိုဝေ စာစောင်ပြန်ထုတ်
ရခိုင် လွတ်မြောက်ရး ပါတီ နှင့် အစိုးရ အပစ်အခတ် ရပ်...
ပြည်သူကပေးလိုက်သည့် အာဏာနှင့်တာဝန်များကို ကျေပွန်စ...
မြစိမ်းတောင်တကြောရှိ တောရ ကျောင်း ၁၀ကျောင်း အား မ....
ဧပြီ ၇ ရက်နေ့ NLD ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ် အားလုံး ...
မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုတချို့လျော့ချရန် အမေရိကန်အသင့...
တရုတ်ကဆောက်လုပ်ပေးပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ဖွင့်ပွဲပြုလုပ...
KNU ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့နှင့် အစိုးရအ...
သေတမ်းစာအတု လူတစုဖြန့် ဝေနေ
ဘုရားလည်းဖူး လိပ်ဥလည်းတူး - Kyaw Thu
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အပြောင်...
ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကို လွှတ်တော်ကို တင်ပြပေးမယ့်...
ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝ လွတ်လပ်မှုတွေ ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းသွာ...
ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်သွားမယ်...
DKBA ကလို့ထူးဘောမှ နိုင်ငံရေးKKO ဖွဲ့စည်း
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
မဲရုံ ပိတ်ပြီး မဲ ရေတဲ့ ရေတွင်းကုန်း အမှတ် (၃) မဲရ...
နှုတ်ခမ်းမွှေးညီနောင် ၏ ရယ်ရွှင် ဘွယ်ရာ ဟာသ
အပြောင်းအလဲနဲ့ ဗလောင်းဗလဲ ( ၂၀၁၂ မင်္ဂလာဒိုး ရဲရဲတော...
ဒဏ္ခိဏသီရိမြို့နယ်တွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ မှ ပြုလုပ်ေ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ ကယားပြည်နယ်ခရီးစဉ်သ...
မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ပြန်စမည်ကို ဒေသခံ ပြည်သူများစိုး...
အရေးပေါ်အသက် ကယ်ဆယ်ရေး - Kuaw Thu
စာမတတ်သူလင်မယား မဲပေးမည့်ကိစ္စအား ရိုင်းစိုင်းစွာ တ...
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား စစ်တပ်မှ သေနတ်ဖြင့်ပစ်
KNU နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ဆက်လက်ပြုလုပ်...
ကေအဲန်ယူ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် (ဧပြီလ ၄ ရက် ၂၀၁၂)
နိုင်ငံရေးအတွက် တပိုင်းတစ လုပ်ခွင့် ရပြီဆိုတဲ့ NLD...
မြန်မာပြည်တွင်းမှ ကလေးသူငယ်များ နှင့် အမျိုးသမီးမျ...
KNU နှင့် အစိုးရ ပြည်ထောင်စု အဆင့်ဆွေးနွေးမည်
အောက်ဖေါ်ပြပါ ကလေးလိုမျိုးတွေ့ ရှိပါက..ဆက်သွယ်အကြော...
လွှတ်တော်တွင်း အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး ပိုလုပ်နိုင်တေ...
ကာ/ချုပ် မင်းအောင်လှိုင်အား ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး...
အချုပ်ခန်းဖောက်မှုကြောင့် သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ် နှစ်ဦးေ...
အရွယ်မရောက်သေးသည့် မိန်းကလေးတစ်ဦးကို မြန်မာ-ယမ်စီ...
အန်အယ်လ်ဒီ အောင်ပွဲခံရာမှ သေနတ်ပစ်မှုဖြစ်ပွား
NLD ၏ အောင်ပွဲ နှင့် F.F.S.S ၏ ပေးဆပ်မှု - Kyaw Thu...
NLD မဲနိုင် မော်လမြိုင်သားများ အောင်ပွဲခံ ( ရုပ်သံ...
မဲ အရေအတွက် ၆၃၆၀၀ မဲနဲ့ အနိုင် ရရှိသွားတဲ့ ဒီချုပ်...
တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ဖို့ လုပ်စရာတွေ အများ...
ဒါအောင်ပွဲ မဟုတ်သေးဘူး ( ကဗျာရှင်-ဖြိုးဝေလှိုင်)
ပါတီ တံဆိပ်ပါတဲ့ အင်္ကျီဝတ်ပြီး မဲရုံးထဲ ဝင်ခွင့် ရတ...
အနိုင်ရ ဒီချုပ် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်မှ တရား...
အနိုင်ရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၄၀ ဦး စာရင်း ထုတ်ပြန...
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျားဖြူပါတီ အနိုင်ရ
အမေစု ကို ကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ ရွေးချယ်ပဲ...
ရိုးသားမှုကို သက်သေပြချင်တဲ့ မဲရုံ တာဝန်ရှိသူမှ ဗီယ...
လှည်းကူး မဲဆန္ဒနယ်မှ မဲထည့်ခွင့် မရခဲ့သည့် မဲဆန္ဒရှင...
လားရှိုးမဲဆန္ဒနယ် မှ ခွပ်ဒေါင်းပါတီနဲ့ ကျားဖြူပါတီ...
ဟင်္သာတ (ဗကသ)အဖွဲ့ဝင် ကျောင်းသား/သူ (၆) ဦးအား ပါမော...
မရမ်းကုန်း မဲဆန္ဒရှင်များရဲ့ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲေ...
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မဲ ရေတွက်နည်း ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ဒေါ်စု ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ ဦးစားပေးသင့်ကြောင်း တိုင...
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အ...
နေပြည်တော်က လူထု အခက်အခဲ NLD အမတ်တွေ ဘယ်လိုဖြေရှင်...
အနိုင်ရ အဖွဲ့ ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်များက...
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အနိုင်ရရှိသူ များ...
တုနှိုင်း၍ မရသော ပီတိ တစ်စုံတရာ - Kyaw Thu
ကော့မှူးမြို့နယ်တွင်း မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများ၏ အသံမျာ...
အမှားတွေ ထပ်မဖြစ်ဖို့ အနိုင်ရ ဒီချုပ် ကိုယ်စားလှယ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးမြို့နယ် မဲရုံတွေကို လု...
ခြိမ်းခြောက် ဟိန်းဟောက် ခံနေရတဲ့ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းက မဲရ...
မြန်မာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆက်လုပ်ရန် အမေရိကန် တို...
၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ အမျိုးသား ဒီမို...
ကျွန်မတို့ ရဲ့ အောင်ပွဲဟာ တကယ်တော့ ပြည်သူတွေရဲ့ အေ...
ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် မျှော်လင့်သလို ရာနှုန်းပြည့် အနိုင...
အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများကို အနှောင့်...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်သူများသို့ ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ( NLD ) မှ မဲဆန္ဒနယ်မ...
နေပြည်တော် မဲဆန္ဒနယ်များ အားလုံး NLD အနိုင်ရရှိ
အောင်ပွဲခံပြီ ခွပ်ဒေါင်းနီ NLD နှင့် ပြည်သူများ ( ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ရန် သေချာပြီ
မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့လာ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိသည်...
NLD ရုံးရှေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲသတင်းများ လာရောက်ကြည်...
ကြားဖြတ်ရွေးကာက်ပွဲနှင့် ပက်သက်သော နောက်ဆုံးရသတင်း...
ဦးကျော်သူ နှင့် ဇနီး ဆန္ဒမဲထည့်ပြီး